တီဗီ Azteca ဘူတာအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွင် Miller Camera အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများသည်ကြံ့ခိုင်ပါသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတီဗီ Azteca ကိုဘူတာ Upgrade များထဲမှကြံ့ခိုင်ရပ်တည်
Project မှ 40 စစ်ဆင်ရေး Miller က DS20 tripod စနစ်များနှင့်အတူဒါရိုက်တာပြင်ဆင်ပေးခြင်းဘူတာရဲ့ ENG ဌာနခွဲ
မက္ကဆီကိုစီးတီး, မက္ကဆီကို, သြဂုတ် 28, 2014 - မက္ကစီကိုရဲ့အဓိကစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များထဲကတစ်ခု, တီဗီ Azteca, မျိုးစုံဘူတာရုံပြုပြင်မှုများကိုခံယူဖို့စတင်တဲ့အခါ, မောဖာရ Trevino, ကွန်ယက်ရဲ့ Project မှ 40 စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ် ENG ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ Project မှ 40 ရဲ့သတင်းကဏ္ဍ refurbishing ၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူအပေါ်မှီခိုဖို့ရွေးချယ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကျော်တဆယ် DS20 2-အဆင့်အလွိုင်း tripod နှငျ့အတူသူ့ကိုထောက်ပံ့ဖို့, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, မြေပြင်ဖြန်အတူစနစ်များကိုအကောင်းဆုံးကသူ၏သတင်းသတင်းထောက်တွေကို '' ထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။
ငါမက္ကစီကိုဖြတ်ပြီးတီဗီ Azteca ကိုဘူတာအားလုံးအတှကျပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူမှုများတာဝန်ခံကွန်ယက်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းမန်နေဂျာအခါ "လွန်ခဲ့သောနှစ်များက, ငါသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှ Analog စမှအ Azteca ကိုဒေသခံဘူတာရုံ upgrade ကိုကူညီဖို့တောင်းခဲ့သည် HD/ SD ကနည်းပညာ, "Trevino ကပြောပါတယ်။ ငါသည်ဤဘူတာရုံအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခဲ့သည်နှင့်အမျှ "ငါအသက်ကြီး tripod အချို့ကိုသတင်းထောက်များအားပြီးခဲ့သည့်လေးငါးနှစ်ကြာလယ်ပြင်၌ရှိသောသူတို့အားသုံးပြီးအသည်းအသန်ခဲ့သော်လည်း, ကြီးသောပုံသဏ္ဌာန်ဆဲခဲ့ကြသည်နှင့်လုံးဝအလုပ်လုပ်တဲ့ခဲ့ကြသည်ကွောငျးတှေ့ဖို့အံ့အားသင့်ခဲ့ ။ သူတို့ဟာ Miller က tripod ခဲ့ကြသည်။ ခဏ မှစ. ငါ Miller ကရဲ့ကင်မရာကိုထောကျပံ့ပစ္စည်းကိရိယာများကို TV Azteca ၏ Project 40 ဘူတာရုံအဆင့်မြှင့်များအတွက်စုံလင်သောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိထားတယ်။ "
Trevino မြေပြင်ဖြန်, ကြောင့် tripod '' အလင်းအလေးချိန်, မာကျောမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုမှ Project မှ 20 များအတွက်စနစ်များနှင့်အတူထက်ပိုတစ်ဆယ် DS2 40-အဆင့်အလွိုင်း tripod ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဘက်စုံသုံးသတင်းထောက်များကိုခဏရဲ့အသိပေးစာမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေရိုက်ကူးဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ "ကျနော့်အဖွဲ့ကအမှန်တကယ်အခြားထုတ်လုပ်သူရဲ့ 3-ဇာတ်စင် tripod နှင့်အတူဤ tripod ၏အမြင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ထို DS20 မြင့်မားလက်လှမ်းမမီခဲ့," Trevino ကထပ်ပြောသည်။ "ထို့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီခြေထောက်ငါ၏အသတင်းထောက်တွေကိုအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ထောင့်ကနေသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်ဖမ်းယူရိုက်ချက်များကာလအတွင်းတက်-နီးကပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွင့်ပြုထားတဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမြင့်မှသတ်မှတ်ထားခံရဖို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ "
Miller ကရဲ့ DS20 2-အဆင့်အလွိုင်း tripod ကို system ရဲ့ဒီဇိုင်းကို 75mm ဘောလုံးကို level နှင့်အတူခြွင်းချက်အရည်ဒယ်အိုးနှင့် tilt ခေါင်းကိုနည်းပညာပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ DS20 အရည်ခေါင်းကို (5 ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်းမှာအများဆုံးစွမ်းရည်ရောက်ရှိ, 11 ပေါင်ပထမဦးဆုံးအနေအထားတွင် 10 ကီလိုဂရမ် (22 ပေါင်) ကိုကိုင်ထားနိုင်ပြီးထို့နောက်ဒုတိယအနေအထားတစ်ခုအပိုငါးခုကီလိုဂရမ်ကိုထောကျပံ့နိုငျသောနှစ်အနေအထား counterbalance ဖု, ကမ်းလှမ်း ) ။ ဒါက tripod ပိုကြီးတဲ့မျက်ကပ်မှန်နှင့်ဘက်ထရီထုပ်၏အလေးချိန်အောက်တွင်တည်ငြိမ်နှင့်တည်ငြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်ကိုသေချာ။ "ငါသည် Miller က DS20 နှင့်အတူအလွန်အားကောင်းတဲ့ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်နဲ့ငါ့သတင်းထောက်တွေကိုထောက်ပံ့တာသင်သိရ," Trevino ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာပင်အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, screw နှစ်ခုခြွင်းချက်ခံနိုင်ရည်နှင့်အတူဦးခေါင်း, ပန်းကန်, လက်ကိုင်ခြင်းနှင့်ခြေထောက်ကိုင်ပြီး, အရပျ၌တည်နိုင်အောင်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Miller က DS20 တီဗီ Azteca ၏ Project 40 ထုတ်လွှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်စုံလင် tripod စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
1954, Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းဒီဇိုင်းများခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကင်မရာအော်ပရေတာများအတွက်ထောက်ခံမှုပေး, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အကြီးအကဲများနှင့် tripod ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်တတ်၏။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခြောက်ဆယ်အနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော, Miller ကခေတ်ပြိုင်ကင်မရာထောက်ခံမှု၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသက်တမ်းကြာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူက 1946 အတွက်ရရှိသောအရာရုပ်ရှင်ကင်မရာများအတွက်အရည်ခေါင်းကိုဒီဇိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ ယနေ့ Miller ကယ့် tripod နဲ့ camera ထောက်ခံမှုစနစ်များကိုမကြာခဏ 65 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကွန်ယက်များ, ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, ကော်ပိုရိတ်ပညာရေးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်သတင်းစုဝေး (ENG), အီလက်ထရောနစ်လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု (EFP), နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို applications များစဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြသည် ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက + 6129439 6377 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.millertripods.com.
အသံလွှင်း မျက်ကပ်မှန် 2014-08-28
ယခင်: Digigram LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe (R) IBC2014 မှာအသံကဒ်အပေါ်နယူး MADI Option ကိုအထူးပြုလုပ်ပါရန်
နောက်တစ်ခု: Dejero နယူး Compact တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာဦးလွတ်မြောက်